ASIEF: Nilatsaka an-tsitrapo namboly hazo tany Mahanoro | Journal Madagascar
Fandrasaina anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena. Nanana delagasiona nandeha tany Mahanoro ny 19 janoary 2022 ny ASIEF (Association Sportive Inter-ministerielle pour l’entretien des fonctionnaires). Nitarika izany i Andrianarison John na i John Love, filohan’ny fikambanana. Fikambanana mampivondrona ireo mpiasam-panjakana amin’ny lafiny fanatanjahantena ny ASIEF. Amin’ny maha olom-pirenena azy ireo no nahatonga ny fikambanana nilatsaka an-tsitrapo nandeha namboly hazo nandritra ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2022. “Amin’ny maha fikambanana ny ASIEF dia tsy mijanona amin’ny fikoloana ny mpiasam-panjakana amin’ny lafiny fanatanjahantena ihany fa mandray anjara ihany koa amin’ny sehatry ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny. Tanjon’ny fikambanana rahateo ny fitaizana ny mpiasam-panjakana amin’ny lafiny ara-tsaina sy fahasalamana ho fanatanterahana ny fampandrosoana ny firenena. Noho izany, manolo-tanana ny fanjakana hatrany ny ASIEF rehefa resaka fampandrosoana”, hoy i Andrianarison John.
Ny 28 janoary 2022 izao no hotanterahina ny fifidianana ny filoha vaovaon’ny ASIEF. Andrianarison John irery ihany no kandida nanatitra ny antontan-taratasy filatsahankofidiana. Nifarana ny 21 janoary 2022 tamin’ny 4 ora sy sasany ny fara-fanaterana izany. Asa maro no mbola miandry ny ekipan’i John Love raha lany fanindroany. Ao anatin’izany ny fanatsarana ny fikarakarana ny fifaninanana ara-panatanjahantena handrasain’ireo mpiasam-panjakana anjara sy ny fandaminana isaky ny taranja. Fantatra fa manokana tetibola handefasana ireo ekipa mandray anjara amin’ny lalao ny ministera tsirairay. Tany Mahajanga no nanatanterahina ny lalao nasionaly taona 2021.
LA CHARITE DE MADAGASCAR - AALEEMEE SOCIETY: Des colis alimentaires en faveur de sinistrés victimes des intempéries